Oovimba baseHongKong-Funda ukuRhweba
I-Geopolitics iqhubela phambili ukuHamba okuPhezulu kweGolide
Ukuhlaziywa: 20 Novemba 2019
Ngaphambili ezindabeni, kwakukhunjulwa ukuba amagosa aphezulu e-US-China ayenomnxeba wekhonferensi yevidiyo apho ababukeli babizwa njengeyakhayo. Abaninzi bakubona oku njengokukhanya okufipheleyo kwitonela nangona ilizwi lokugqibela lixhomekeke kumongameli wexilongo.
Abatyalomali bangene kule veki benethemba nangona i-US isoyikisela ukubetha ngaphezulu kweerhafu kwimpahla yaseTshayina kwimeko yesivumelwano esingaphumelelanga.
NgoLwesibini, kwiminyhadala yeziganeko, uMongameli uTrump waphinda wathi imeko yaseMelika yokunyusa umrhumo kwimpahla yaseTshayina kwimeko yesivumelwano esingaphumelelanga isazinzile ngalo ndlela ithembisa ukuza kuthi ga ngoku.
Imfazwe yorhwebo ebithathe iinyanga ezili-16 yadala uloyiko lokudodobala koqoqosho kwihlabathi liphela; ke ngoko isoyikiso sikaMongameli sinokuyinqanda inkqubela yeengxoxo zorhwebo. Abahlalutyi baqikelela ukuba umthetho osayilwayo osandula ukupasiswa yi-US Congress ukuxhasa uqhankqalazo eHong Kong unokuba sisikhubekiso kwinkqubela phambili esele yenziwe ukuza kuthi ga ngoku.
Ngaphandle kwetyala eligqithisiweyo lokuxhasa amalungelo oluntu eHong Kong, i-US Congress iphinde yadlulisa omnye umthetho wokuphelisa ukuthunyelwa kwezinye iimbumbulu emapoliseni aseHong Kong. Oku akuzange kulunge kakuhle ne China egculele i-US ukuba iyeke ukuba ngumlindi.
Iindlela zegolide eziPhakamileyo
Indawo yegolide enqamleze phezulu ukuya kuthi ga kwi-1,473.98 yeedola ngeyunce kusasa namhlanje ngenzuzo yentengiso ye-0.1% ngelixa ikamva legolide lase-US libambe i $ 1,474.40 ngeyunce.
Igolide kusafuneka idibanise inzuzo yayo inikwe imizuzu elindelweyo evela kwiFederal Reserve ekufuneka iphume kamva namhlanje. Kukho iingqikelelo zokuba isigqibo seFed sokubamba uzinzo kwinqanaba lomyinge walo linokujongela phantsi isinyithi esixabisekileyo.
I-Federal Reserve iqalise inzala kathathu yokunciphisa inzala kulo nyaka ngelixa isigqibo sayo sokubamba sizinzile saqhwatyelwa izandla ligosa eliphezulu le-Federal Reserve ukuba lixhase uqoqosho lwase-US.
Kwicala laseAsia, imakethi yezabelo yathatha indawo ukusuka kwiingxelo ngeentetho zorhwebo ngelixa ukubuyela umva kwabonwa kwimarike ye-equities.
Nangona iGolide yayithathe isiphantsi kwintengiso yee-equities, ihlala ixhaswe yimeko yezopolitiko.
Uhlalutyo oluphezulu uqikelele ukuba i-Spot yegolide inokunyuka ukuya kwi-1,480 yeedola ide ifike kwi-1,485 yeedola ngeyunce.
Ezinye izinyithi ezixabisekileyo ezinjengesilivere ezigcinwe ngokuzinzileyo kwi- $ 17.14 ngeyunce, ngelixa i-palladium yayimi -0.1% ukuya kwi-1,760.80 yeedola ngeyunce
IPlatinamu ime kwi-0.6% ukuya kwi-904.52 yeedola ngeyunce.
tags igolide, Hongkong, Intetho zase-US-China zorhwebo